कोरोनासँगै तिहार – Sthaniya Patra
By स्थानीय पत्र Last updated Nov 16, 2020
घर घरमा दीपहरुको झिलीमिलीद्धारा मनाइने भएकाले तिहारलाई दीपावली पनि भन्ने गरिन्छ ।
कार्तिक कृष्णपक्षको त्रयोदशीदेखि कार्तिक शुक्ल द्वितीयासम्म कागतिहार, कुकुरतिहार, लक्ष्मीपूजा (दिपावली), गाईतिहार, र भाइतिहार (टीका) गरेर पाँच दिनसम्म (यस वर्ष चाहीँ प्रतिपदासम्म ४ दिन) लगातार मनाइने यो चाड पूर्णरूपमा वैज्ञानिक तथा मनोवैज्ञानिक जगमा खडा भएको देखिन्छ ।
तिहारको पहिलो दिन कागपूजाका दिनमा घरआँगनको फोहोरमैला सफा गर्ने र किम्वदन्तीका अनुसार हुलाकीको काम गर्ने कागको पूजा गरिन्छ । कुकुर तिहारका दिन घरको रखवाली गर्ने कुकुरको पूजा गरेर कुकुर तिहार मनाइन्छ ।
लक्ष्मीपुजाका दिन धनकीदेवी लक्ष्मीको पुजा र दिपावली गरेर मनाइन्छ ।
गाईतिहारका दिन गाईको पूजा गरेर गाईतिहार मनाइन्छ ।
गाई हिन्दुहरूका लागि आमा जस्तै हुन् । त्यसैले गाईलाई गौमाता भन्ने गरिन्छ । लक्ष्मी पनि भन्ने गरिन्छ ।
गाईको दुध जति पोशिलो हुन्छ, त्यत्ति नै गाईको पिसाब र गोबर गुनिलो हुन्छ । वास्तवमा गाई एक औषधालय हो । हिन्दुहरूको जीवनमा गोरुको पनि कम महत्व छैन । त्यसैले गोरुतिहार र गाईगोरुको संरक्षण तथा समृद्धिका लागि गोवद्र्धन पूजा गर्ने चलन चलेको हो ।
तिहारको अन्तिम दिन भाइटीका पर्छ । यस भाइतिहारमा दिदी–बहिनी–दाजु–भाइ जम्मा भएर अष्ट चिरञ्जीवी (अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान्, विभीषण, परशुराम, प्रल्हाद) र यम–यमुनाको पूजा गरी दाजुभाइलाई दिदीबहिनीले निधारमा मंगलटीका र कहिल्यै नओइलाउने मखमली फूलको माला लगाइदिएर मनाउने गरिन्छ ।
दसैंतिहार होस् वा कुनै पनि बेलामा होस्, निधारमा टीका लगाउने प्रचलन हाम्रा ऋषिमुनि (प्राचिन वैज्ञानिक) हरुको महान् आविस्कार हो । निधारमा टीका लगाउनुको वैज्ञानिक महत्व छ ।
दुई आँखीभौंको विचको भाग अर्थात् भृकुटी, जहाँ टीका लगाइन्छ, त्यो पिनियल ग्लैण्डको केन्द्र (योग विज्ञानका अनुसार आज्ञा चक्रको केन्द्र वा त्रिनेत्र) हो । त्यसैले यस केन्द्रमा टीका लगाउनाले आज्ञा चक्र वा पिनियल ग्लैण्ड सक्रिय हुन्छ, जसले गर्दा मस्तिष्क शक्ति तथा चेतना शक्ति बढ्छ ।
झिलिमिलीको चाड, तिहारमा घरलाई झिलिमिली बनाइ पुजाआजा गर्ने तथा टीका लगाउनुको साथै भैलो र देउसी खेल्ने परम्परा छ ।
देउसीभैलोको पनि आफ्नै सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक महत्व छ । यो परंपरा मनोरञ्जनका साथसाथै समाजिक सद्भाव विकासका लागि सुरु गरिएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
शब्दकोशका अनुसार कार्तिक कृष्ण औँसी र गाईतिहारका दिन लक्ष्मीपूजाको उपलक्ष्यमा गाइने विशेष किसिमको गाथा वा गीत र त्यस्तो गीत घरघरमा गाउँदै हिँड्दा श्रद्धाले दिइएको चिज लिँदै हिँड्ने–सांस्कृतिक उत्सव मनाउने काम भैलो हो ।
भैलो लक्ष्मीपूजा गरेपछि मनाउने चलन हो । लक्ष्मीपूजाको वा गाईतिहारको भोलिपल्ट र पर्सिपल्ट (भाइटीकाको दिन) घरघर घुम्दै एउटा (नायक)ले भटयाउँदै सहयोगीहरूले सम्याउने आसिकसुचक गाथा र सोही गाथाले गाउँदै माग्दै आसिक दिन काम देउसी हो ।
अतः देउसी र भैलो अलग–अलग किसिमको सांस्कृतिक उत्सव हुन् । देउसी र भैलो खेल्ने दिनमात्र होइन तरिका पनि फरक छ ।
तर हिजोआज यस उत्सवलाई दालभातझैँ एकठाउँमा पुछेर ३ दिन होइन कि हरिबोधनी एकादशीसम्म डाकाँकालेझैँ घरघरको ढोका ठटाएर जबरजस्ती पैसा असुलेर मनाउने कुप्रवृत्ति बढेको छ ।
हो, अहिलेको युगमा रूपैयाँ–पैसा अत्यावश्क कुरा हो । रूपैयाँपैसा बिना मानिसको जीवन चल्न सक्दैन । आममानिसको कुरा त परै छोडौं, घरपरिवार सबकुछ त्यागेका सन्यासीलाई समेत पैसा आवश्यक पर्छ । रूपैयापैसाको यही महत्वलाई ध्यान दिएर नै लक्ष्मीपूजाको सुरुवात भएको हो ।
लक्ष्मीपूजाको आफ्नै किसिमको विशिष्ट महत्व छ । यो व्यवहारिक र वैज्ञानिक कुरा पनि हो । पौराणीक कथा अनुसार लक्ष्मी विष्णुकी पत्नी, धनकी अधिष्ठात्री देवी हुन् । अर्को शब्दमा भन्ने हो भने लक्ष्मीदेवी त्यत्ति बेलाकी अर्थमन्त्री जस्तै हुन् ।
त्यसैले ढुकुटीको साँचो लिएर बसेकी लक्ष्मीको पूजा गरेपछि धनसम्पत्ति पाइन्छ भन्ने मान्यता बसेको हो । जस्तो कि अहिले जसले अर्थमन्त्रीको जति पूजा गर्न सक्दछ, त्यत्ति नै बजेट निकासा पाउँछ भन्ने कुरा त सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो ।
मनोवैज्ञानिक दृष्टिले लक्ष्मी तथा सरस्वती आदि जस्ता देवीदेउताहरू मानव मनमस्तिष्कमा गहिरो ज्ञान राख्ने ऋषिमुनिहरू (प्राचीन वैज्ञानिकहरू) को एक महान् मनोवैज्ञानिक आविस्कार हो ।
यस्ता मनोवैज्ञानिक टेक्नोलोजीलाई नै चलाखीपूर्ण ढंगले धर्मसंस्कृति मार्फत् जनमानसको जीवनशैलीमा ल्याइएको हो ।
लक्ष्मीपूजाको वैज्ञानिक तथा मनोवैज्ञानिक आधार भनेको नै न्यूरो–कण्डिसनिंग सिद्धान्त हो ।
यो सिद्धान्तलाई प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक पैवलवले कुकुरमा प्रयोग गरेर देखाएपछि यो सिद्धान्त ‘पैवलवको क्लासिकल कण्डिसनिंग सिद्धान्त’ का नाउँमा चर्चित भएको हो ।
त्यसैले शान्त मनले एकाग्र भएर धनकी देवि लक्ष्मीको पूजाप्रार्थना गर्नुको एक मात्र उद्देश्य धनमनस्थितिको मस्तिष्क पुनर्संरचना (ब्रेन रिवाइरिंग) गर्नु हो । ‘लक्ष्मी ब्रेब’ पैदा गर्नु हो । यो एकदम सम्भव र वैज्ञानिक कुरा हो ।
मानव मस्तिष्कमा एक असाधारण र अद्भुत लचकताको गुण हुन्छ, त्यो गुणलाई स्नायुविज्ञानको भाषामा न्यूरोप्ल्यास्टिसिटि भनिन्छ ।
मस्तिष्कको यही गुणका कारण नै मानिसको जीवनभरि नै मस्तिष्क पुनर्संरचना सम्भव हुन्छ । मानिसले चाहेको खण्डमा जुनसुकै उमेरमा पनि मस्तिष्कको रिवाइरिंग गर्न सक्दछ ।
मस्तिष्कको सवालमा बुढो कुकुरलाई नयाँ टेक्निक सिकाउन सकिँदैन भन्ने उखान पूर्णरुपमा लागू हुँदैन । हो, कुनै कुनै बुढो कुकुरलाई नयाँ टेक्निक सिकाउन केही बढी समय लाग्न सक्दछ । मस्तिष्कको पुनर्संरचनामा मनको सबै भन्दा ठूलो हात हुन्छ ।
अर्को शब्दमा भन्ने हो भने मन नै मस्तिष्क पुनर्संरचनाको मुख्य औजार हो ।
मनले मस्तिष्क पुनर्संरचना गर्न सक्ने कुरा एकदम सत्य हो । एक खुंखार डाँका रत्नाकर कसरी महर्षि ‘वाल्मिकी’ भए ? अगुंलीमाल जस्तो हत्यारा कसरी बुद्धको चेला बन्न पुग्यो ? के मस्तिष्क पुनर्संरचना बीना यो सम्भव थियो ? कदापि थिएन ।
सिद्धार्थ गौतम पनि जन्मिदै बुद्ध भएका होइनन्, ध्यानद्वारा मस्तिष्क पुनर्संरचना गरेर ‘महात्मा बुद्ध’ भएका हुन् । अतः ध्यान मन प्रशिक्षणको एक सर्वोत्तम मनोवैज्ञानिक विधि हो ।
ध्यानको यही महत्वलाई बुझेर नै प्राचिन ऋषिमुनीहरुले धर्म र चाडपर्वका माध्यमबाट यसलाई मानिसको दैनिक जीवनमा ल्याएका हुन् ।
पूजापाठ गर्नु, प्रार्थना गर्नु, भजनकिर्तन गर्नु तथा निधारमा टीका लगाउनुको कारण पनि ध्यान नै हो । मनको प्रशिक्षण हो । निधारमा टीका लगाएपछि ध्यान कहाँ जान्छ, निधारमा । होइन र ?
अन्तमा कोरोना महामारीका कारण यसपालिको तिहार सावधानीपूर्वक मनाउन अति आवश्यक छ । यसपाली तिहारमा साथीभाइ जम्मा भएर जुवातास खेल्नु ठीक छैन ।
सकेसम्म धेरै टाढाटाढाका दिदीबैनीकँहा भाइटीका लगाउन नजाने, जाने पर्ने स्थितिमा पर्याप्त सुरक्षा विधि उपनाउने, खानपिनमा विशेष ध्यान दिने तथा देउसीभैलो नखल्ने । (लेखक साइकोथेरापिष्ट तथा मेमोरी ल्याब प्रमुख हुन् ।)
एसियाली हात्ती जोगाउन १३ वटै देशमा वन्यजन्तुमैत्री पूर्वाधार
बेलायतले युक्रेनलाई २ मिलियन पाउण्ड बराबरको खाद्यान्न उपलब्ध गराउने
चरित्रहत्या गर्ने नियतले पर्चा छर्नेलाई अनुसन्धानका लागि १० दिन म्याद थप
बुटवलको मेयरका लागि कांग्रेसबाट खेलराज पाण्डेको नाममात्र…
नेकपा ओली समूहको प्रदेश अध्यक्षमा गिरी, जिल्लाको…
नेपाली काँग्रेसद्वारा शोक सभा सम्पन्न